Yahuuda oo ka welwelsan Awooda Siixoogeysaneysa ee Turkiga | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Yahuuda oo ka welwelsan Awooda Siixoogeysaneysa ee Turkiga
Yahuuda oo ka welwelsan Awooda Siixoogeysaneysa ee Turkiga
Awoodda Turkiga ee dhinaca badda ayaa sii kordheysa waxayna halis ku tahay mustaqbalka iyo Jiritaanka Israel, si ay lagu sheegey daraasad cusub oo dhawaantaan Soo baxday.
Waqtigaan la joogo, Ciidanka Badda ee Turkiga waa ciidanka ugu xoogan badda ee gobolka, Siyaasadda Badda & amp; Xarunta Cilmibaarista Istiraatiijiyaddu waxay ku leedahay qiimeynta sanadlaha ah oo dhinaca Militeriga ah.
Istaraatiijiyadda badda ee Turkiga ayaa isbedeleysa maadaama dalku uusan mar dambe diiradda saarin xiriirkiisa NATO, Korneel (res.) Shlomo Guetta ayaa ku qoray daraasadda Jaamacadda Haifa. Taa baddalkeeda, Ankara waxay dhiseysaa Ciidan tilmaamaya awood goboleed isla markaana fulin kara howlo fog, ayuu yiri.
Falanqeyntu waxay muujineysaa qaybaha muhiimka ah ee xoogga badda ee Turkiga oo ah mid walaac gaar ah leh. Ankara waxay cusbooneysiineysaa maraakiibta badda hoosteeda maraya.
Guud ahaan, Ciidanka Badda ee Turkiga ayaa la filayaa inay soo bandhigaan 12-14 maraakiibta gujiska ah ee casriga ah, taasoo siineysa inay si cad uga faa’iideystaan ​​Israa’iil.
Turkigu wuxuu kaloo dhisayaa frijiyeyaal badan iyo corvettes wuxuuna ku hubeynayaa gantaalada Harpoon, ayay tiri daraasadda.
Si la mid ah, Ciidanka Badda ee Turkiga waxay xoojinayaan xooggooda shaqo joojinta iyo awoodda faragelinta, ayuu yiri Guetta. Mashruuc caan ka ah wejigan hore ayaa ah dhismaha Anadolu, oo ah markab weerar culus oo u adeegi kara sida diyaaradaha xamuulka qaada ayey Ankara Dooneysaa in ay dhisato.
Khabiir milatari oo Mareykanka lana yiraahdo Richard Parley ayaa ku qiyaasay in markabkan cusub ee dagaalka ay siin doonaan Turkiga awoodo shaqo abuur oo aan horay loo arag oo ku saabsan Badda Madoow iyo Bariga Dhexe, sida daraasada ka muuqata.
Intaa waxaa dheer, Turkiga wuxuu soo saaraa hubkiisa iyo qalabkiisa militariga, oo ay ku jiraan gantaalaha dalxiis oo gaaraya boqollaal kilomitir. Iskusoo wada duuboo, Ankara waxay u wareegeysaa wax soo saar iskeed ah ee hantida badda waxayna ku tiirsan tahay qibrada Jarmalka si ay u dhisto maraakiibta quusta iyo maraakiibta kale.
Sanadihii la soo dhaafay, Turkiga waxay qabteen laylisyo waaweyn oo dhinaca badda ah oo ay la socdeen in ka badan 100 markab iyo daraasiin diyaarado ah, ayay daraasaddu sheegtay Waqtigaan la joogo, Ciidanka Badda ee Turkiga waa in dhab ahaan loo tixgeliyaa inay yihiin bad-biyo-cagaaran oo ka shaqeyn kara meel ka baxsan xeebaha dalka, ayuu qoray Guetta.
Falanqaynta ayaa xustay in ciidamada badda ee Turkiga ay leeyihiin khibrad hawl adag, laakiin ay ku heleen khibrad qiimo leh tababar ay la qaateen ciidamada badda ee Maraykanka.
Turkiga miyuu wajihi doonaa Israel?
Daraasadu waxay ku soo gabagabeyneysaa in awooda badda ee Turkiga ay inta badan hanjabaad u tahay kooxaha dhaqameed ee ay xafiiltamaan ee gobolka hada, iyo gaar ahaan Griiga iyo Masar. Si kastaba ha noqotee, waxay ka digeysaa in Israel ay si dhab ah uga fiirsato halista ka imaan karta sidoo kale.
Guetta wuxuu tilmaamayaa danaha dhaqaale ee Turkiga ee badda, cadaawada aasaasiga ah ee Israa’iil, iyo damaca xukunka ee awooda iyo sharafta sida arrimo walaac gaar ah leh. Marka la eego ku tiirsanaanta Israel ee dhoofinta badda, Qudus waa inaysan iska indha tirin hubka cajiibka ah ee ay leeyihiin ciidamada badda, ayuu yidhi, Mr Guetta.
Waxa xusid mudan, daraasad hore ayaa ka digtay in Turkigu uu si toos ah u soo faragalin karo khilaafka soo socda ee u dhexeeya Israel iyo Xamaas ee Gaza. Himilooyinka gobolka ee dowladda Turkiga waxay ka dhigeysaa isku dhac mustaqbal inta badan lama huraan, daraasadda ayaa Muujineysa.
Previous articleSomalia: The United States Opposes Federal Government Term Extensions
Next articleWaa Kuma General Koronto Oo Sheegay inuu Qabsan doono Dekadda iyo Airporka Muqdisho
Madaxweyne Deni oo hortago Baarlamanka Puntland, si uu warbixin...
Wararka ka imaanaya Magaalada Garowe ayaa sheegaya in Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, lagu wado in uu Sabtida soo socota hortago...
Madaxweynaha Waqtiga ka dhamaaday oo soo dhaweeyey 2sano ku...
Jen Saadiq Joon war ka soo saaray xiisaha Dagaalka ee Caawa
Punland oo Jawaab adag ka bixisay war ka soo yeeray Madaxweynaha...